Kuniichi Fonosana Sakafo - Famolavolana
Fonosana Sakafo Tsy dia malaza eto an-tany ny sakafo nentin-drazana japoney nentin-drazana Tsukudani. Lovia vita saosy mifangaro mofomamy mifangaro amina haingon-tany sy makiazy isan-karazany. Ny fonosana vaovao dia misy labozia sivy natao hananganana ny fomba japoney nentim-paharazana ary maneho ireo toetran'ireo akora. Ny marika marika vaovao dia novolavolaina miaraka amin'ny fanantenana amin'ny fanohizana an'io fomban-drazana io mandritra ny 100 taona ho avy.
Anaran'ny tetikasa : Kuniichi, Anaran'ny mpamorona : Katsunari Shishido, Anaran'ny mpanjifa : COCODORU.
Fonosana Sakafo Katsunari Shishido Kuniichi